Marc Tatandraza sy ny ekipany: nahazo fahafahana vonjimaika | Région Boeny
Fahafahana vonjimaika mandra-piandry ny raharaham-pitsarana ny Alakamisy 07 May 2015. Io no tapaky ny tao amin’ny Fampanoavan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Mahajanga ny Alatsinainy 16 marsa 2015 rehefa natolotry ny polisy mpanao famotorana ny fitsarana ny raharaha Fiangonana Ambasadaorin’ny Lanitra tarihin’Atoa Marc Tatandrazana, izay notorian’ireo fianakaviana manana olana aminy.
Tsiahivina fa ny Alarobia 11 Marsa lasa teo no nisy ny fisamborana an’Atoa Marc Tatandrazana sy ny namany telo, teny amin’ny foibeny eny Antanimasaja, Mahajanga. Fakana tsy ara-drariny ny fananan’ireo olona izay mivavaka ao ho amidy sy fitazonana ireto farany an-keriny, izay tsapan’ny fianakaviana fa lasa toa tsy tompon’ny tenany intsony, izay no niatombohan’ny tantara, ary niafara tamin’ny fifampikasihan-tanana hatrany Amboromalandy, Marovoay ka hatrao Antanimasaja Mahajanga.
Marc Tatandraza, Clermont, Maître Sanga ary olona iray no nandraisan’ny fitondrana isan’ambaratongany teto amin’ny Faritra fepetra nosamborina avy hatrany ary nakatona ilay toeram-pivavahan’izy ireo taorian’izay.
Natolotra teny amin’ny Fampanoavana ny Alatsinainy 16 Marsa teo ity raharaha ity izay azo lazaina ho nanahirana tokoa satria ireto mpitarika ity fiangonana ity dia nilaza ampahi-bemaso fa tsy azo tsarain’olombelona izy ireo fa Andriamanitra irery ihany no afaka mitsara azy.
Marihina fa nandritra ny fotoana rehetra nanaovana famotorana azy ireo tao amin’ny Polisy Mangarivotra dia tsy nety nisakafo sy nisotro rano izy ireo.
Nandritra ny fampidirana azy ireo indray ho alaina am-bavany tao amin’ny biraon’ny Fampanoavana teny Mahajanga Be no nampitrifana azy efa-dahy mpitarika fivavahana ireto. Raha iny ho petahana rojo-vy iny indrindra ny tànana’izy ireo noho izay fitroarany izay dia nanao fanoherana miaro fikasihan-tànana ireo mpitandro ny filaminana izay niambina azy izy ireo.
Tery ivelan’ny trano Fitsarana moa vao maraim-be dia efa vory ny vahoaka izay liana hijery sy ireo mpino mpanara-dia an’Atoa Marc Tatandraza. Sarotra ho an’ny mpitandro filamina ihany ny namehy ny toe-draharaha noho izany.
Ankoatra io, asa na noho ny fitokonana tsy nihinan-kanina andro maromaro na vokatry ny harerahana tamin’ny fanoherana tamin-kery fa torana ingahy Tantandraza avy eo ary mbola nentin’ny mpitandro filaminana tany amin’ny CHU Androva aloha ka rehefa niahatsiaro tena vao nentina niverina tao amin’ny Fitsarana, niroso tamin’ny famotorona izay efa somary maizina.
Taorian’izay no nanambara ny Tonian’ny Fampanoavana fa nomena fahafana vonjimaika izy efa-dahy ary ny Alakamisy 07 May 2015 izy ireo no handalo fitsarana ampahi-bemaso. Ny fitoriana azy ireo dia mbola mipetraka mandrakariva saingy aty ivelany izy ireto no miandry ny fotoam-pitsarana hoy ny Tonian’ny Fampanoavana. Nostipihany fa malalaka tanteraka ny fivavahana eto amitsika, ary tsy io no enjehina fa ny fandikan-dalàna. Ka raha misy kosa hoy ihany izy ny fihoaram-pefy ataon’ireto voharohirohy ireto eny anelanelany izay dia tsy maintsy ampiharina amin’izy ireo avy hatrany ny lalàna satria tany tan-dalàna i Madagasikara.
Ambetin-dresaka ao anatin’ny tori-tenin’ny Ambasadaorin’ny lanitra hoy ireo fokonolona manodidina ao Antanimasaja, ary filazana tsy tapaka vakian’i Maître Sanga amina fahita lavitra iray eto an-toerana isan’andro ny hoe « Efa ho tonga ny fotoana farany ary efa Armagedona no misy amin’izao fotoana izao. Fidio ho Filohan’i Madagasikara i Jesosy Tompo ary izany dia isika izay tarihin’i Apostoly Marc Tatandraza no voahositra hanatanteka izany. Ny fitondrana izay misy amin’izao dia tarihin’ny Satana ka tokony ho ravàna sy ho potehina ».